मेरो बरन्डाको कुकुर | मझेरी डट कम
मेरो बरन्डाको कुकुर
kbs — Sat, 03/13/2010 - 11:35
मधुपर्क २०६६ माघ
कुनै सम्प्रदाय विशेषमा श्राप दिनुपरे भन्छन् रे ­ "लौ, तैँले घर बनाउनुपरोस् ।'' घर बनाउनेले भोग्नुपर्ने पीडाको सहज अभिव्यक्ति हुँदो हो त्यो । मैले पनि घर बनाएँ यसपालि र भोगेँ ती सबै पीडाहरू जो मेरोजस्तो हैसियत राख्नेका लागि शाश्वत थिए । घर बनाउने हैसियत मेरो थियो कि थिएन, त्यसमा बहस जरुरी भएन किनकि मेरो घर बनिसक्यो ।
घर बनाउने भगीरथ प्रयत्नमा जम्मा भएका थरीथरीका व्यक्ति­-व्यक्तित्वहरूसँगको भलाकुसारी र उहाँहरूको राय-सुझाव, सरसल्लाह र प्रशस्त नकारात्मक अभिव्यक्तिहरू छन् मसँग । तिनले कहीँ कतै मलाई प्रेरणा नै दिइरहेका छन् ।
घरलाई बस्न सक्ने तुल्याएर साइत गरेको दोस्रो दिन एक जना आफन्त आएर भन्नुभयो­ "ल, ठीकै छ । तर कोठाचाहिँ साना भए । अनि यो बरन्डा । बेकारमा ठाउँ खेर फाल्नु भएछ । यसलाई पनि कोठामै गाभेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो । बरन्डा त कुकुर सुत्ने ठाउँ त हो नि । कुकुरलाई यत्रो ठाउँ ?''
म झसङ्ग भएँ । उत्तर के दिने ? केही सोच्न सकिनँ । मैले त बरन्डा मेरै लागि बनाएको थिएँ । कुकुरका लागि त बनाएको थिइनँ । कुकुर देखुञ्जेल त म धपाउँला तर मैले नदेखी आएर सुत्छ भने मैले त्यसमा के गर्न सक्छु र ।
अचानक केही विचार आयो । हेरेँ त्यहीँ बरन्डालाई । कुकुर सुत्ने बरन्डा । भित्रबाट खाट ल्याएँ, दरी ओछ्याएँ र पल्टिएँ । आहा मेरो घरको मेरो बरन्डा र म..... ।
बरन्डाको प्रयोग नितान्त वैयक्तिक हुँदोरहेछ, मलाई केही आभास हुँदैछ । मलाई ती कुरा सुनाउने सज्जनलाई बरन्डा ठाउँ, समय र पैसाको बर्बादी हुन सक्ला तर मेरालागि मेरो बरन्डाले धेरै अर्थ राख्छ ।
त्यही बरन्डामा बसेर वैशाखे गर्मीमा बिहानै कफीको सुर्को तान्दै काठमाडौँ पोस्टका पन्नाहरू पल्टाएर मेरो दिनचर्या सुरु हुन्छ । त्यहीँबाट छिमेकीहरू टाइगर अङ्कल र नारायणजीलाई अभिवादन गर्छु र पूर्वैयाले यही बरन्डामा मलाई शीतलता दिन्छ ।
म घरमा सर्नुभन्दा अघि बसेको रमा बहिनीको घरको छत यही बरन्डाबाट देखिन्छ । उहाँ त्यहाँबाट केही भन्नुहुन्छ र म जवाफ र्फकाउँछु । गोविन्दभाइको डेढबर्से छोराले मैले यसै बरन्डाबाट 'ए.....भाइ.......!' भनेर बोलाउँदा खित्का छाडेको सबैलाई मन पर्छ ।
यही बरन्डामा बसेर म सम्झिरहेको छु, घर बनाउनका लागि गरेका प्रारम्भिक दौडधुपहरू । कतै सुनेको थिएँ भुवनेश्वर गएर आएपछि घर नहुनेको पनि घर बन्छ
रे ! विश्वासको एउटा त्यान्द्रो समातेर घर बन्ने आसमा भुवनेश्वरबाट किनिल्याएको सादा कागजमा चार जना परिवार- सदस्य मिलेर महिनौँ लगाएर बनाएका घरका प्रारम्भिक नक्साहरू । रुपियाँ-पैसाको मेलोमेसो र कामको निरन्तरताको चासो ।
उत्तरपट्ट िलिम्बूदाइको सुँगुरको खोरमा त्यसको घुँकघुँकसँगै मेरा मनमा पनि कहीँ कतै दिक्दारीहरू हल्लिन्छन् र तिनकै दुर्गन्धले मेरा नाकका पोरा पनि थुनिन्छन् । चारो खाने ठाउँमा बिस्ट्यायो भनेर ती निर्दोष जोडी सुँगुरलाई लिम्बूदाइ भाटा बर्साउँछन् । हामी सपरिवार तिनको ती सुँगुरहरूमाथि गरिएको दुव्र्यवहार या अनुशासनको कारबाहीका मूकदर्शक छौँ । यो बरन्डा साक्षी छ । हेर्नोस्, नकुट्नुस तिनलाई । तिनले खाने ठाउँमा फोहोर गर्नुहुँदैन भन्ने जानेको भए तिनीहरू सुँगुर नै हुने थिएनन् । मान्छे भइहाल्थे नि । भनी अनेकन् पटक लिम्बूदाइलाई भन्न चाहेको पनि हुँ तर मुख फोरिएन । ती लिम्बूदाइलाई झोक मात्र चल्छ । प्रायः चौबीसै घण्टा आफ्नो नियन्त्रणमा नरहने तिनलाई पशु सद्भावको कागजी कुराले कतै समाउन सक्तैन भन्ने मेरो अड्कल छ । फेरि केही भनियो भने त्यही भाटो आफ्नै टाउकामा आइलाग्यो भने ! मेरो मनले फेरि गम्छ किन लिम्बूदाइ मात्र यहाँ यस्ता मान्छे कति छन् कति, टाउको दुखेको दवाइ नाइटामा लगाउने ।
यो त्यही बरन्डा हो जहाँबाट छिमेकी कविताकी छोरी फुच्ची रञ्जनाले अङ्ग्रेजी पढेको सुन्छु । उनकी देउरानी तुलसाले आफ्नो छोरो राजले अटेरी गर्दा वात्सल्यले भरिएको सजाय दिएको, तिनका फूलबारीमा फूल फुलेको र तिनकै तुलसीको मोठमा दियो बलेको, कविता र तुलसाका आँखाहरूमा रहेको प्रतीक्षा देख्छु । रञ्जना र राजले भोलिपर्सि परदेशबाट आउने बुबाहरूबाट थाप्ने कोसेलीको कल्पना पनि मलाई यही बरन्डामा मात्रै आउँछ ।
घर बनाउने प्रारम्भिक दौडधूपका कुराहरू, रड, सिमेन्ट, इँटा, ढुङ्गा, बालुवा, गिटी, भरोट, काँटी, तार, रुपियाँ-पैसाको मेलोमेसो आदि-इत्यादिका हरेक झमेलाहरूका हरहिसाबको साक्षी छ यो बरन्डा । सिमेन्ट र रड राख्ने ठाउँको अभाव र दक्षिणका छिमेकीलाई गरिएको अनुरोध सम्झँदा म अझै विचलित हुन्छु । मेरी पत्नी र मैले उनीहरूको खाली गोठमा ती सामान राख्न कमसेकम दर्जनपल्ट अनुरोध गर्‍यौँ तर उहाँहरूले घर बनाइहाल्ने बहानाले दिनुभएन । पहिले पनि तीन छिमेकीहरूले त्यो ठाउँ प्रयोग गरेको हुनाले मैले पाउँदिन भन्ने कतै लागेन । मेरो बरन्डामा बसेर दक्षिण र्फकंदा पहिलो दृष्टि त्यही गोठ पर्छ, जुन अहिलेसम्म जस्ताको तस्तै छ । त्यसमा पलाएका ढुँडी र काइमा म उहाँहरूकै चित्र देख्छु र मेरो मन प्रत्येक पल्ट अमिलिन्छ । त्यस अर्थमा यो मेरो सच्चा साथी भएको छ ।
म यहीँ बसेर मेरो घरलाई आफ्नो जसरी बनाउने मिस्त्री र मजदुरहरूलाई मनमनै अभिवादन गर्छु । तिनीहरू दिनका दिन अरूका सपनाको महल उभ्याउन पसिना चुहाउँछन् । आफ्ना सिर्जनात्मक हातहरूले चोटा­ कोठालाई जीवन्तता दिन्छन्, र महिनौँ दिनपछिको श्रमपछाडि घर जिम्मा लगाएर आफ्नै फुसका झुपडीहरूमा रात गुजार्छन् । सायद आफूले दिनका दिन मेहनत गरेर बनाएको महल ती सपनामा देख्ता हुन् । तिनले मेरा घरका चोटा­कोठा सिँगारिरहँदा, आफू त्यहाँ भएको, आफूले कोठाहरूको उपभोग गरेको र आफ्नो जीवन नै त्यहीँ बित्ने कल्पना गर्दा हुन् र नै यी चोटा­कोठा यति सुन्दर भएका छन् । जिन्दगी गुजार्ने नियमितताका लागि अर्काको महल बनाएको बनायै गर्ने यी महान् शिल्पीहरूभन्दा ठूला कलाकार को हुन सक्लान् र ? तिनले यस बरन्डामा ढल्किएर शीतल ताप्दै चाँदनी हेर्ने कल्पना पनि त गरेका होलान् ।
हो, यही बरन्डामा ढल्किएर म पूणिर्माको चन्द्रमामा मेरो सुन्दर नेपालको मानचित्र खोजी हिँड्छु । त्यहीँ कहिले मेरो देश भेटिन्छ, कहिले मेरा देवकोटा भेटिन्छन् । पशुपतिनाथको गजुरले मलाई त्यहीँबाट आशीर्वाद दिन्छ । उहीले विद्यार्थी छँदा दार्जीलिङमा कोठाको झ्यालमा बसेर चन्द्रमा नियाल्दा गान्धीले खबरदार गरिरहन्थे । अहिले मेरो बरन्डाबाट बी.पी. र मदन भण्डारीको आँसुले भरिएका अनुहार मात्र देखिन्छन् । तारा र बादलहरूको लुकामारीमा कतै बिजुली चम्केझैँ बिस्फोट हुन्छ, कतै रोदन र चित्कारका छहराहरू देखिन्छन् त कतै मान्छेका शवहरूका थुप्रामा बनेका भव्य महल देखिन्छन् ।
हो, यही बरन्डामा बसेर कल्पना गर्छु, ती महिला र पुरुषहरूलाई दिने ओठे जवाफहरू जुन मैले त्यसबेला दिन सकेको थिइनँ । 'सटर खोइ त ? घर त बिगि्रगएछ नि ।' 'प्यासेज नराखेको, अब यो, यो,...कोठा कसरी भाडा लगाउने ?' 'यत्रो कोठालाई भान्सा बनाएर बिगारेको ? छतमा सानो बनाउँदा भइहाल्थ्यो नि ।' आदि आदि । यी सबै कुराका जवाफहरू मलाई त्यही बरन्डाले दिएको छ ।
मेरो त जीवन हो बरन्डा । यही बरन्डामा बसेर मैले श्रमिक पर्शुराम उर्फ सप्तरीयाको कथा लेख्नु छ, लमतन्न सुतेर उन्मुक्तताको सास फेर्नु छ, आँखाहरू तल र माथि पार्दै आकाशमाथि उडिरहेका सपनाहरू पक्रिनु छ । मेरो घर ताकेर आउने हरेक पाहुनाहरूलाई देवतालाई झैँ स्वागत गर्नुछ ।
मेरो बरन्डा मेरो विगत, आगत र भविष्यको दर्पण हो, मेरा परिवारसँग र बुढेसकालमा जीवनसाथीसँग जिउने थलो । म यही बरन्डामा बस्न चाहन्छु, यहीँ आराम गर्न चाहन्छु । म र मेरो बरन्डा नै ठीक, तपाईं......... ।
Reply to comment | मझेरी डट कम
आत्मा र परमात्माको खोज
सहिद औपचारिकता वा महान बलिदान ?
सोह्र सोमबारको व्रत
आमा ! मातृवन्दना
बन्दबाट पराजित हामी
आमा - २
नियम मिचेर गजल लेख्दैछु
भर्जिनिया, म्याग्दी र १९३ औं भानुजयन्ती
उदयपुरमा एक मूर्तिभित्र पाँच मान्छे
तीन मुक्तक (धर्मशास्त्र, हिन्दू दर्शन, पूजाआजा)
विश्वेश्वरबारेको साहित्यिक दस्तावेज
गाला मात्र धुन्छ्यौ किन?
आखिर एक दिन मर्नैपर्छ
सम्झनाः निबन्धसङ्ग्रहमा पहिलो
लक्ष्यण देखा परेछ , तिमीलाई मन पराउनु
मझेरी भलाकुसारी, अंक २१ (कल्पना राई)
मुर्कुचीका शेर्पा र पडरियाका मियाँ : एकै मनका दुई मूर्ति
मुनामदन र जि वया ला लाछि मदुनि गीतिकथा
दुई मुक्तक (केतकी फूलको पराग जस्तै)
नआऊ है बिदेशमा
चाँद बनेर टल्किदिन्छ्यौ
दैलेख: हिमालको काखमा तेस्रो धाम